TensorFlow sy Pytorch: Open Source AI Platforms | Avy amin'ny Linux
TensorFlow sy Pytorch misy sehatra 2 «Inteligencia Artificial (IA)» de «Código Abierto». Ny voalohany dia noforonin'i Google ary ny faharoa kosa ampiasain'ny Facebook betsaka. Fa, Inona no atao hoe faharanitan-tsaina? La «IA», araka ny efa nolazainay tamin'ny lahatsoratra teo aloha "Revolisiona indostrialy fahefatra: Ny andraikitry ny lozisialy maimaim-poana amin'ity vanim-potoana vaovao ity" dia iray amin'ireo teknolojia vaovao maro izay manova ny lalan'ny fiarahamonina nomerika taonjato faha-XNUMX antsika ankehitriny.
Raha fintinina, azonao atao ny mamaritra ny «IA» toy ny teknolojia vokatry ny fitambaran'ny algorithms natao ho an'ny tanjon'ny mamorona milina (rindrambaiko) izany dia mitovy fahaiza-manao fa ny zanak'olombelona.
La «IA» mahatonga izany azo atao ho an'ny milina mianatra avy amin'ny zavatra niainany na olon-kafa, ampifanaraho sy ampifanaraho amin'ny fahalalana vaovao sy ny toe-javatra niainana ary manaova asa toy ny olon-drehetra. Ho fanampin'izany, ity haitao ity matetika dia miaraka na ampiasain'ny hafa, indrindra ny 2 fantatra amin'ny anarana hoe «Aprendizaje Profundo (Deep Learning)» y «Procesamiento del Lenguaje Natural (Natural Language Processing)». Ary ny «Big Data» io koa dia be mpampiasa ao.
Amin'izany fomba izany, ireo teknolojia ireo dia mamela ny solosaina sy ny robot ankehitriny, ary angamba ny Android iray andro voaofana tsara sy mahomby, hanatanterahana asa manokana toy ny fanodinana angon-drakitra marobe, ny fanekena ny lamina amin'ny angona, ny fanaovana na ny famahana ny lalao na ny asa atao, ny fivezivezena (mitondra tena) na ny famindrana zavatra amin'ny toerana samy hafa, ankoatry ny zavatra maro hafa.
1 Karazana faharanitan-tsaina (AI)
2.1 TensorFlow: Inona izany ary inona ny mampiavaka azy?
2.2 Pytorch: Inona izany ary inona ny mampiavaka azy?
2.3 Misy safidy hafa azo atao
Karazana faharanitan-tsaina (AI)
Raha fintinina, AI dia mety ho tena ilaina amin'ny famoronana:
Rafitra mieritreritra toa ny olombelona: Para mandeha ho azy ny fanatanterahana hetsika, toy ny: Fanapahan-kevitra, famahana olana ary fianarana. Ohatra: Rtaonan'ny neural artifisialy.
Rafitra mihetsika toa ny olombelona: Mamorona milina izay manao asa mitovy amin'ny fanaon'ny olona. Ohatra: Robot sy Android.
Rafitra mieritreritra ara-dalàna: Para alao tahaka ny fisainana lojika mirindra (mahita, mamakafaka ary manao zavatra) an'ny olombelona. Ohatra: Srafitra manam-pahaizana.
Rafitra miasa ara-dalàna: Para alaivo modely ny fitondran-tena olombelona. Ohatra: Takelakaolona marani-tsaina.
TensorFlow: Inona izany ary inona ny mampiavaka azy?
Io no sehatra artificielle artificielle be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao
Noforonin'i Google (Brain) hampiasaina anatiny izy io ary navoaka tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana malalaka misokatra Apache 2.0 tamin'ny 9 Novambra 2015, nanolo ny loharano nikatona azy teo aloha, DistBelief.
Izy io dia ampifanarahina amin'ny famakiam-boky ho an'ny loharano misokatra izay mikendry ny fianarana lalina, izay azo alaina ho an'ny Windows, Linux, MacOS, ary sehatra finday izay misy Android sy iOS.
Ny tanjony dia ny hanomezana fahafaham-po ny filan'ny rafitra mahay manangana sy mampiofana ny tambajotra neural mba hahitana sy hamaritana ny lamina sy ny fifandraisan'ny olona, ​​izay mitovy amin'ny fianarana sy ny fanjohian-kevitra ampiasain'ny olombelona.
Ampiasaina izy io amin'izao fotoana izao na amin'ny fikarohana na amin'ny famokarana ny vokatra Google, manolo ny andraikitry ny loharano nikatona teo alohany, DistBelief.
Ny anarany dia avy amin'ny asa ataon'ny tambajotran-tsofin'ity rafitra ity amin'ny fametahana angona multidimensional izay matetika antsoina hoe: Tensors.
Fanamarihana: Ny fampahalalana bebe kokoa momba azy dia azo raisina avy aminy tranokala ofisialy.
Pytorch: Inona izany ary inona ny mampiavaka azy?
Izy io no sehatra artifisialy artifisialy be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao.
Fantatra amin'ny maha-tranomboky voalohany an'i Facebook amin'ny fampiharana lalina.
Izy io dia fonosana Python natao hanatanterahana kajy isa amin'ny alàlan'ny fandaharam-pianarana tensor. Ankoatr'izay, izy io dia manolo ny fonosana Numpy.
Mamela ny fanatanterahana azy amin'ny GPU hanafaingana ny kajy natao. Izy io dia mampiasa CUDA ao anatiny, API iray mampifandray ny CPU amin'ny GPU izay novolavolain'i NVIDIA, izay ahafahana manafaingana ny fizotran'ny fomba nentim-paharazana toy ny fiofanana maodely.
Ampiasaina betsaka amin'ny fizotran'ny fikarohana sy ny fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny fianarana lalina, mifantoka amin'ny fampandrosoana ny tambazotram-pifandraisana, amin'ny alàlan'ny interface tsotra be.
Ny PyTorch dia miasa miaraka amin'ny sary mavitrika fa tsy ny static.
Tokony ho fantatrao ny fiteny fandaharana "Lua" hampiasana azy.
Misy safidy hafa azo atao
Manantena izahay fa izany ianao "lahatsoratra kely nefa mahasoa" momba ireo 2 mahaliana ireo «Plataformas de Inteligencia Artificial (IA) de Código Abierto» antso «TensorFlow y Pytorch», izay ho an'ny ankehitriny, izay saika ny ankamaroan'ny manam-pahaizana AI manerantany dia mahaliana sy mahasoa ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahafinaritra sy goavambe ary mihamitombo ny fampiharana sy ny «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » TensorFlow sy Pytorch: Open Source AI Platforms
Edge, ny tranonkala vaovao an'ny Microsoft dia efa manomboka manaiky fanitarana